गफ ! .....: लघुकथा : प्रोत्साहन
Posted by दीपक जडित at 12:58 AM
सान्दर्भिक रहेछ ... आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न नपाएका सष्टारुलाई प्रोत्साहन र अवासरको खाचो छ ।
तर असल उद्देश लिएर ठाउमा पुगेका हरुले आफ्नो धरातल बिर्सिदिदा ... यस्तै यस्तै नियतिहरु दोहोरिदै जान्छन - दीपक जी ।
एकदमै समसामयिक र यथार्थबादी कथा रहेछ । साहित्य क्षेत्रमा प्राय: यस्तो ओठे प्रोत्साहनमात्रै पाउँछन नवोदित साधकहरुले ।
i like very much ur story !
समसामयिक र सान्दर्भिक कथा! एक-दुई पटक मैले पनि भोगेको छु यस्तै नियति।
मलाई भने अलि फरक विचार आयो दीपक दाइ !! हाम्रो देशमा कविता लेख्‍न पाको छैन प्रकाशनको लागि होडबाजी गरिहाल्ने प्रथा छ । अलि धेरै लेखेर आफ्नो रचनामा निखारता ल्याउने प्रयास धेरै कमले मात्रै गर्छन् । मोफसलका स्रष्टा त झन् एउटा कवितामा ताली पाउने वित्तिकै त्यहाँका स्थानीय प्रकाशनलाई गलत्याएर राष्ट्रिय स्तरको हुन खोजिहाल्छन् । मैले मेरो बुवा 'समष्टि' पत्रिकाको सम्पादक हुँदा अनुभव गरेको कुरा हो यो । आफ्नो ठाउँमा परिचित नभईकनै एकैचोटि राष्ट्रिय स्तर खोज्ने स्रष्टाको पनि कमी छैन हाम्रो देशमा ॥ टुटेफुटेका सिर्जना गर्दै ठूलै ठाउँ ताकिहाल्ने स्रष्टाको कथा लाग्यो मलाई दीपक दाइ यो !!
यो कथाको व्यङ्ग्यभन्दा पनि सोझो अर्थसँग म सहमत छु !!
नेपाली रङलाई ज्यादै सारगर्भित कथारूप दिनुभएको छ । मोफसल र फसलको भेद अनि बौद्धिकहरूको अनैतिक आचार त हाम्रो कथा मात्र होइन व्यथा नै हो । चित्त बुझ्यो ।
धन्यवाद सबैलाई । उजेलीले देखेको फरक विचार पनि सोचनीय हो । लघुकथाले पक्कै धेरै बोल्न सक्दैन । प्रायजयो ट्वाक्क यौटा कुरा बोलेको हुन्छ तर त्यसभित्र देखिने अनेक कुराहरु पक्कै हुन्छन् । उजेलीको प्रतिक्रिया नै पनि यौटा लघुकथा बन्यो मेरो नजरमा चैं - कुनैदिन लेखिन बेर नलाग्ने गरेर ।